ဖားကန့် သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာများနဲ့ မှော်နယ်မြေ...
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Monday, November 07, 2011 Monday, November 07, 2011 Labels: ဖားကန့်မှော်နယ်မြေအကြောင်းများ
ကျွန်မတို့ ဖားကန့်တစ်ခွင်ရဲ့ တောင်ပေါ်လမ်းတွေ၊ မြေလမ်း ကြမ်းကြမ်းတွေကို နေပူပူ၊ ဖုန်ထူထူမှာ မျက်နှာ ဖုံးတွေ၊ ဦးထုပ်တွေနဲ့ ကာဗာ ယူပြီးသကာ မှော်နယ်မြေအနှံ့ ခြေဆန့်ကြပါတယ်။ အားလုံးလည်း ကျွန်မနဲ့ အတူတူ ဖားကန့် မှော်နယ်မြေရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းများကို ကြည့်ရှုကြရအောင်လားနော်...
တောင်တန်းတွေကို တစ်ပိုင်းတစ်စ တူးဖော်နေတဲ့ ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက် တစ်နေရာ
တူးကြ ဆွကြ ရှာဖွေကြ
ဒီလိုသာတူးနေရင် နောင်တစ်ချိန်ကျ ဖားကန့်ဆိုတာ မြေပုံပေါ်မှာ ရှိပါဦးမလား
ဖားကန့်တစ်ခွင်မှာ နေရာတိုင်း ကြည့်လေရာရာတိုင်းဟာ ကျောက်တူးနေတဲ့ လုပ်ကွက် အကြီးစားတွေနဲ့သာ ပြည့်နေပြီး ယခင်က စိမ်းစိမ်းစိုစို တောင်တန်းတွေဟာ ခုလို ဖြိုချခံထား ရပြီးတဲ့ လုပ်ကွက်တွေသာ ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ သဘာဝ အလှအပဆိုတာ ရှားရှားပါးပါး လိုက်ရှာရမဲ့ နေရာတစ်ခု ပါ။ ပြီးတော့လည်း ခုလို ကုမ္ပဏီများစွာတို့က အပြိုင်အဆိုင် အကြိတ်အနယ် တူးဖော် ရှာဖွေနေ လိုက်ကြ တာဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျောက်စိမ်းဆိုတာ မြင်ချင်လို့တောင် မမြင်ရတော့မဲ့ ရှားပါး ပစ္စည်း ဖြစ် သွားတော့မှာ သေချာပါတယ်။ မြင်နေရတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ.. ဖားကန့်ဆိုတဲ့ ကျောက်စိမ်း နယ်မြေဟာ လူတွေ ရဲ့ လောဘနဲ့ တူးကြဆွကြ၊ မြေလှန် ရှာဖွေကြတဲ့အတွက် ကမ္ဘာမြေပြင်ဟာ အပိုင်း ပိုင်း ပြတ်တောက်လို့ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်များနဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
ကျောက်တူးပြီး မြေကြီးတွေ ဖယ်ပစ်လိုက်လို့ ကျင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာ ပြန်မဖို့ဘဲ ထားလိုက်တော့ ရေကန်ကြီးလိုဖြစ်လာ
ဟိုးယခင်တုန်းကတော့ ကျွန်မတို့ ဖားကန့်ဒေသမှာ ကျောက်တူးတယ်ဆိုတာ ခုလို စက်တွေ၊ ဘက်ဖိုးတွေ၊ မြေသယ်ကားကြီးတွေနဲ့ တူးကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သံတူရွင်းတွေ၊ ဂေါ်တောင်းတွေ စတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အတူ လူအင်အားနဲ့သာ တူးဖော်ကြတာမို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုနှုန်းက ခုလောက် မမြန်ဆန်ပါဘူး.။ ခုချိန်မှာတော့ ကုမ္မဏီ လုပ်ကွက်တွေက စက်တွေ၊ ကားတွေ များစွာနဲ့ အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက် တူးဖော်ကြတော့ ပျက်စီးမှုနှုန်းထားက အံ့မခန်း မြန်ဆန် လွန်းလှပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ မြင်ကွင်းတွေက မယုံနိုင်စရာ ကောင်းလောက်အောင်၊ မမှတ်မိနိုင်လောင်အောင် အပြောင်း အလဲ မြန်လွန်းလှပါတယ်။
ပုံထားတဲ့ မြေစာပေါ်မှာ ရေမဆေးရှာကြသူများ
ဖားကန့်ရတနာမြေဟာ ကျောက်စိမ်းတင်မက ရွှေပါထွက်တာမို့ ဥရုချောင်းနဲ့ မှော်တစ်လျှောက်မှာ ခုလို ရွှေမျှော လုပ်ကွက်တွေ မနည်းမနော ရှိနေပါတယ်.
မြို့ရွာတွေနားက မြေကြီးတွေ ဒီလိုကပ်ပြီးတူးတဲ့အခါ အဲဒီရွာတွေရဲ့ နောင်ရေးက စဉ်းစားစရာ..
တစ်ချိန်ကတော့ တောတောင် သစ်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းစိုလှပ သာယာခဲ့ပြီး၊ ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ ဥရုချောင်းကလေး ခွေကာရစ်ကာ စီးဆင်းနေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ ဇာတိမြေဟာ ခုတော့ဖြင့် မကြည်မလင် ညိုးရော်ကောက်ကွေ့စွာ စီးဆင်းနေခဲ့ရပါပြီ။ တောင်တွေပြုန်းလို့ တောတွေကတုံးဖြစ်ကာ မြေမညီမညာ၊ ချိုင့်ဝှမ်း၊ အင်းအိုင်တွေနဲ့ မြင်တွေ့ရပုံဟာ သံဝေဂယူမယ်ဆိုရင် သံဝေဂ ရစရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ပါ.. ဒေသခံတွေ အတွက်ကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းကနဲ့ မတူအောင် ပူပြင်းလာတဲ့ ရာသီဥတုက ဥတုရာသီ တောကိုမှီဆိုတဲ့ စကားလို တောတောင်မရှိတော့ ရာသီဥတုကလည်း ပိုပြီး ပူပြင်းလာတာကို သက်သေပြလို့ နေပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ဖားကန့်တစ်ခွင်ရဲ့မြေပြင်အနေအထား ဖြစ်ပျက်နေ ပုံကိုကြည့်ပြီး တန့်ယန်း ဆရာတော် စဝ်ဆုခမ်း - (အရှင်သုခမိန္ဒ) ရဲ့ လောကနဲ့ လောဘ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ဖားကန့် မှော်နယ်မြေ နောက်ခံနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ အပေါ်ကပုံနဲ့ ကွက်တိကို ကျနေတော့တာပါဘဲလေ...လူတွေရဲ့ လောဘမကုန်သေးသရွေ့၊ ကျွန်မတို့ ဖားကန့်ကလူတွေလည်း ရင်ခုန်နေရဦးမှာပါ။ ရင်ခုန်ရတယ် ဆိုတာက ငါတို့အိမ်ကလေး ဘယ်တော့များ မြေစာပုံအောက် ရောက်မလဲ၊ ဒီနှစ်လဲ မိုးရွာရင် ချောင်းရေက ဘယ်လောက်ထိ နှစ်ဦးမှာလဲ စသဖြင့် တွေးတော ပူပင်ပြီး ရင်ခုန်နေရတာကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါကြောင့်လည်း ကျောက်စိမ်းတူးဖော်တဲ့ လုပ်ကွက်တွေကို စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်စေမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်လာတာဟာ ဖားကန့် နယ်မြေခံ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝမ်းသာကျေနပ်မိတဲ့ သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါ တယ်..
ဖားကန့် ကျောက်တွင်းတွေအကြောင်းတော့ စာတွေအများကြီး ရေးခဲ့ပြီးပြီမို့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မရေးတော့ဘဲ ပုံတွေသာ များများ တင်လိုက်ပါတယ်.. ပုံတွေကြည့်ပြီး ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းကို မြင်ယောင်ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါပြီနော်။ ဖားကန့်အကြောင်း စာတွေ အသေးစိတ်ဖတ်ချင်သေးရင် ဖားကန့်မှော်နယ်မြေ အကြောင်းများ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရှာကြည့်ပါလို့သာ ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်.
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, November 05, 2011 Saturday, November 05, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီတစ်ပတ် ချက်ကျွေးချင်တဲ့ဟင်းလျာက ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း မကြာခဏ ချက်စားဖြစ်တဲ့ ကြက်သား ကချင်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟင်းဟာ ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ နာမည်ကျော်တဲ့ ဟင်းတစ်မယ် ဖြစ် ပါတယ်.. အရင်ကလည်း ကျွန်မဘလော့မှာ တင်ဖူးခဲ့သလို အခြားသော ကချင်ပြည်နယ်သူ ဘလော်ဂါများလည်း တင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်... ဘယ်နှခါ ချက်စားစား မရိုးနိုင်သလို ကြက်သား ကချင်ချက်ရဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာဟာလည်း ခံတွင်းမြ်ိန်စေတာ အမှန်ပါ။ ကြက်သားကို ဆီပြန်ကြီးဘဲ ချက်စားဖြစ်ရင် ကြာတဲ့အခါ အီလာပါတယ်။ ကချင်ချက်ကတော့ ဆီအနည်းငယ်လေးသာ ပါတဲ့အတွက် မအီဘဲနဲ့ အနံ့လေး မွှေးနေတာကြောင့် ထမင်းပိုမြိန်မှာ သေချာပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း ကြက်သားကို ဆီပြန်ဟင်း ချက်ရင် အရိုးဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်၊ တောင်ပံတို့ကို သိပ်မစားကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကချင်ချက် မှာတော့ အရိုးတွေပါ စားကောင်းတာမို့ အရိုးများတဲ့အပိုင်း၊ အသားများတဲ့အပိုင်းရယ်လို့ ခွဲခြားစရာမလိုဘဲ အားလုံးစားလို့ ကောင်းပါတယ်. ကျွန်မတို့ဘက်မှာ တစ်ချို့ စားသောက်ဆိုင်တွေဆိုရင် ရင်ပုံ၊ ပေါင်၊ စသဖြင့် အသားများတဲ့ နေရာတွေကို အခြားဟင်းတွေလုပ်ပြီး အရိုးများတဲ့ ခြေထောက်၊ ခေါင်း၊ တောင်ပံ စတာတွေကိုတော့ ကချင်ချက် ချက်ရောင်းကြပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တာက ကချင်ချက်ဟာ အရိုးရော အသားပါ စားလို့ကောင်းပါတယ်လို့ ကြော်ငြာဝင်တာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.. :P
ပထမဦးစွာ ကြက်သားချက်ဖို့ ရေစင်အောင်ဆေးပြီး အနေတော်အတုံးများကို တုံးပါတယ်.. အများ အားဖြင့်တော့ ကချင်ချက်ကို အတုံးအသေးလေးတွေ တုံးကြတာများပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ ထောင်းထည့်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်၊ ငရုပ်သီးစိမ်းများများ၊ ရှမ်းနံနံ၊ ပင်စိမ်း၊ ဖက်ဖယ်ရွက် စတဲ့ ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်ရွက်တွေကို ပါးပါးလှီးထည့်ပါတယ်။ မက်လင်သီး (သို့မဟုတ်) ချဉ်စော်ခါးသီး အခြောက်ကို ရေဆေးပြီး ခပ်ငယ်ငယ်တုံးပြီး ထည့်ပါတယ်.. ကချင်ချက်မှာ အချဉ်နဲ့ အစပ်က အဓိကမို့ အချဉ်အရသာဖြစ်တဲ့ မက်လင်သီးအခြောက်က မပါမဖြစ် ဖြစ်ပါတယ်.. တကယ်လို့ မက်လင်သီး၊ ချဉ်စော်ခါးသီး မရနိုင်ရင် ဟင်းကျက်ခါနီးမှာ သံပုရာသီးလေး ညှစ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
အရောင်တင်ငရုပ်မှုန့်၊ ဆားအနည်းငယ်၊ ငံပြာရည်၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ဆီအနည်းငယ်တို့ ထည့်ပြီး သမအောင် မွှေပါတယ်.
ဒါကတော့ ချက်မဲ့အိုးထဲမှာ အသားရော အဆာပလာတွေရော တစ်ခါတည်း ထည့်ထားတာပါ။ ကချင်ချက်ဟာ ဆီသတ်ဖို့မလိုဘဲ တန်းပြီး လုံးချက်ချက်ရတာဖြစ်ပါကြောင့် ဆီကုန်လည်း သက်သာပါတယ်..း)
အဆာပလာ အားလုံးထည့်ပြီး နယ်ပြီးသား ကြက်သား
ရေထည့်ပြီး ချက်လိုက်ပါပြီ... ကြက်သားနူးရင် အရသာ အပေါ့အငံမြည်းပြီး ချလို့ရပါပြီ..
လျှင်ရင်းမြက်မဲ့ ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက်ပါ။။။ ဟင်းအိုးကျက်မှာ ဖက်ဖယ်၊ ရှမ်းနံနံတို့ကို ထပ်ထည့်ပါတယ်.. အနံ့ပိုမွှေးအောင်လို့ပါ။
နောက်ထပ် ဟင်းတစ်မည်က ငါးခူကို ချဉ်စပ်လေး ချက်တာပါ။ ချက်ပုံက အပေါ်ကနည်းနဲ့ သိပ်မထူးပါဘူးရှင်။
ငါးခူကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ အကွင်းလေးတွေ လှီးပြီး ဆား၊ အရသာမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုပ်သီး နှိုင်းချင်း၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ တစ်နာရီ၊ ၂နာရီခန့်ကြာအောင် ထားထားလိုက်ပါတယ်.. အရသာတွေ အထဲဝင်အောင်ပါ။
ချက်မဲ့အိုးထဲထည့်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး တို့ကို ထည့်ကာ ရေထည့်ပြီး ချက်လိုက်ပါတယ်. ငါး ကျက်ခါနီးမှာ ရှမ်းနံနံ၊ ဖက်ဖယ်တို့ကို ထည့်လိုက်ပြီး သံပုရာသီးကို ညှစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်.. ဆီလုံးဝ ထည့်မချက်ထားပါဘူး။
ထို့နောက်မှာတော့ သံပုရာနံ့မွှေးမွှေးနဲ့ ငါးခူချဉ်စပ်ဟင်းရပါပြီ။..
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဟင်းချက်ရင် ထည့်ချက်စားလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းခတ်အရွက်တွေပါ။ အပေါ်ကဟင်းတွေမှာ ဒီအရွက်တွေ ထည့်ပါတယ်.. အလယ်က အရွက်ကတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ရှမ်းနံနံပါ.. ရှမ်းနံနံဟာ ဘေးဘက်မှာ လွှသွားတွေလို ရှိတာမို့ ( Saw leaves) လို့ ခေါ်ပြီး ဘယ်ဘက်က အရွက်ကတော့ ပင်စိမ်းရွက် ( Basil leaves) ပါ။
ကချင်ဟင်းချက်ရင် မပါမဖြစ် အသုံးပြုတဲ့ ဖက်ဖယ်ရွက်ပါ.. အင်္ဂလိပ်လို ( Praew leaves (or) Vietnamese coriander) လို့ပြီး စင်္ကာပူမှာတော့ Laksa leaf လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ ကြက်သား၊ ငါး၊ အမဲသားတို့ကို ခုလို ဖက်ရွက်တွေနဲ့ ထုပ်ပြီး ရောင်းချတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ချဉ်စပ်ဟင်းလေးတွေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ ခေါင်ရည်နဲ့ မြည်းလိုက်မယ် ဆိုရင် ဆွေမျိုးမေ့ သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း ရောက်ဖူးတဲ့သူတွေက ပြောပြကြပါလိမ့်မယ်နော်..း)
သိပ်စပ်ရင် အချိုပွဲစားလို့ရအောင်... အသီးစုံနဲ့ ကျောက်ကျော
ဒီတစ်ပတ်တော့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ကချင်ချက်ဟင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်... အားလုံးအတွက် Happy Weekend ဖြစ်ကြပါ စေရှင်။
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, November 03, 2011 Thursday, November 03, 2011 Labels: နှစ်သက်မိသော စာစုများ
ကျောင်းနေဖို့ အသက်ပြည့်ပြီဖြစ်လို့ ကောင်ကလေးဟာ ကျောင်း စတက်ရပါတော့မယ်… သူတက်ရမဲ့ ကျောင်းကြီးကို ကြည့်ပြီး ကောင်ကလေးက ကျေနပ် ပျော်ရွှင်လို့ နေပါတယ်… သူဟာ ကျောင်းစတက်ခါစ အခြားကလေးငယ်တွေကို ငိုယိုနေတာမျိုး၊ အော်ဟစ်နေတာမျိုး မရှိဘဲ ကျောင်းနေပျော်မဲ့ ကျောင်းသားကလေး တစ်ယောက်ပမာ ပျော်ရွှင် တက်ကြွလို့နေခဲ့တယ်။ သူတက်ရမဲ့ အခန်းဟာ ကျောင်းတံခါးဝကနေ မြက်ခင်းပြင်ကို ဖြတ်ပြီး သွားရင် တောက် လျောက် ရောက်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့အတွက် သိပ်ကျေနပ် သဘောကျနေခဲ့ပါတယ်။
သူကလေး ကျောင်းစတက်တဲ့ ရက်မှာဘဲ ဆရာမက “ ဒီနေ့တော့ ပုံဆွဲတာ စသင်မယ်” လို့ ပြောလာတဲ့အတွက် ကောင်ကလေးက သိပ်ကို ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ သူက ပုံဆွေဲရတာ အလွန်ဝါသနာပါပြီး ကျား၊ ခြင်္သေ့၊ ကြက်၊ ငှက်၊ နွား ၊ ရထား၊ လှေ စတဲ့ပုံတွေအားလုံးကို သူက ကောင်းကောင်းကြီး ဆွဲတတ်ပါတယ်။ သူဟာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ သူရဲ့ ရောင်စုံလေးတွေကို ထုတ်လိုက်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှာ ပုံစဆွဲဖို့ ပြင်ပါတော့တယ်။
“ဟေး… ကောင်လေး မဆွဲနဲ့ဦး.. ” လို့ ဆရာမက သူ့ကို လှမ်းအော်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အတန်းသားတွေ အားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်မဖြစ် ဆရာမက စောင့်ကြည့်လိုက်ပြီး အားလုံး ပုံဆွဲဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှ “ကဲ.. အခု ပန်းပွင့်ကလေးတွေရဲ့ပုံ စဆွဲမယ်” လို့ ပြောလိုက်တော့ ကောင်လေးက “ ပန်းပွင့်ပုံ ဆွဲရင်လည်း ကောင်းသားဘဲ.. ငါ ပန်းပွင့်ပုံ ကောင်းကောင်းဆွဲတတ်သားဘဲ” လို့ တွေးလိုက်ပြီး ပန်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာရောင် ရောင်စုံခဲတံလေးတို့နဲ့ ပန်းပွင့်ပုံ ဆွဲပါတော့တယ်။
သို့ပေမဲ့လည်း “နေဦး.. မဆွဲနဲ့ဦး.. ဆရာမအရင် ဆွဲပြမယ်.” လို့ပြောပြီး နံရံပေါ်က သင်ပုန်းပေါ်မှာ ဆရာမက ပန်းပွင့်ပုံကို ဆွဲပြပါတယ်. ဆရာမဆွဲတဲ့ ပန်းပွင့်က အနီရောင်နဲ့ ရိုးတံက အစိမ်းရောင်ပန်းပွင့်ကလေးပါ။ ကဲ.. အခု ဆရာမဆွဲပြတဲ့အတိုင်း လိုက်ဆွဲကြတော့ ” လို့ ပြောပြီး ပန်းပွင့်ပုံ စဆွဲခိုင်းပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ ဆရာမဆွဲထားတဲ့ အနီရောင်ပန်းပွင့်လေးကိုကြည့်လိုက်.. သူဆွဲထားတဲ့ ပန်းပွင့်လေးကို ကြည့်လိုက် ကြည့်နေပြီး သူ့စိတ်ထဲမှာလည်း သူဆွဲထားတဲ့ ပန်းပွင့်လေးကိုသာ ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်.။ သို့သော်လည်း ကောင်လေးဟာ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ စာရွက်နောက်တစ်ရွက် လှန်လိုက်ပြီး သူ့ဆရာမ ဆွဲပြထားတဲ့အတိုင်း အနီရောင်ပန်းပွင့်လေးနဲ့ ရိုးတံအစိမ်းလေးကို ဆွဲလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းရောက်တော့ ကောင်လေးဟာ သူ့အနားက အခန်းပြူတင်းပေါက်ကနေ ကျယ်ပြန့်သာယာစွာ မြင်နေရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းတွေကို ငေးမောကြည့်ရင်း သဘောကျကျေနပ်နေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အတန်းထဲကို ဆရာမ ဝင်လာပါတယ်။ “ ဒီနေ့တော့ ရွံ့စေးတွေနဲ့ အရုပ်တွေလုပ်ကြမယ်ဟေ့” လို့ အတန်းသားတွေကို ပြောလိုက်တော့ ကောင်ကလေးက ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ရွံ့စေးရောင်စုံလေးတွေနဲ့ နှင်းလူ၊ မြွေ၊ ဆင်၊ ကြွက် ၊ ကား စတဲ့အရုပ်လေးတွေကို လုပ်ရတာ သူ သိပ်သဘောကျပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကောင်ကလေးက ဝမ်းသာအားရနဲ့ သူ့ရဲ့ ရွံ့စေးဘူးလေးကို ဆွဲထုပ်လိုက်ပြီး လက်ကလေးနဲ့ ဖိညှစ်လိုက်ကာ ထွက်လာတဲ့ ရွံ့စေးလေးတွေကို လက်နဲ့ အလုံးကလေး လုပ်ပါတော့တယ်။
“ နေဦး.. မလုပ်နဲ့ဦး ” ဆရာမရဲ့ အော်သံထွက်လာပါတယ်. သူက ရွံ့စေးလေးကို လုံးနေရာက ရပ်လိုက်ပြီး ဆရာမထံ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဆရာမက အတန်းသားတွေ အားလုံး အဆင်သင့် ဖြစ်အောင် စောင့်လိုက်ပြီးမှ “ ကဲ.. အခု အားလုံးဘဲ ပန်းကန်ပြားလေး စလုပ်ကြည့်ရအောင် ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကောင်ကလေးကလည်း “ ကောင်းတယ်.. ပန်းကန်ပြား လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းတာဘဲ.. ငါပန်းကန်းပြားတွေ ကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တာပေါ့” လို့ တွေးလိုက်ပြီး လျှင်မြန်သွက်လက်လှတဲ့ သူ့ရဲ့လက်တွေက ရွံ့စေးလေးတွေနဲ့ ပန်းကန်ပြား အရွယ်မျိုးစုံတို့ကို ရွံ့စေး ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ လုပ်ပါတော့တယ်။
“ဟေး.. နေကြဦး.. ပန်းကန်ပြား ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ ဆရာမ ပြမယ်၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် အရင်မလုပ်နဲ့ဦး” လို့ အော်လိုက်ပြီး ဇောက် ခပ်နက်နက် ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ကို ဆရာမက လုပ်ပြလိုက်ပြီး “ကဲ.. အခု ဆရာမပြတဲ့အတိုင်း ပန်းကန်ပြား စလုပ်လို့ရပြီ” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကောင်ကလေးဟာ ဆရာမရဲ့ ပန်းကန်ပြားကိုကြည့်လိုက်၊ သူလုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန်လေးတွေကိုကြည့်လိုက် လုပ်နေပြီး သူ့စိတ်ထဲမှာ သူလုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန်လေးတွေကို ပိုပြီး သဘောကျပေမဲ့ ဘာမှ မပြောတော့ဘဲ သူလုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန်တွေကို အားလုံး လုံးခြေလိုက်ပြီး ရွံ့စေး အလုံးကြီးကြီး ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဆရာမပြတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဇောက်နက်နက် ပန်းကန်တစ်ခုကို စတင် ပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပန်းကန်ကို ပုံစံလေးဖော်လိုက် ဆရာမလုပ်ထားတဲ့ ပန်းကန်ကိုကြည့်လိုက်၊ အဲဒီပုံအတိုင်းဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်နဲ့ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ သူ့ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးနဲ့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
အဲဒီကျောင်းမှာနေပြီး အချိန်အတော်ကြာတဲ့အခါမှာ သူ့မိသားစုဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အခြားမြို့ကို ပြောင်းရွေ့ ရပါတယ်။ ကောင်ကလေးဟာ အဲဒီမြို့က ကျောင်းအသစ်မှာ ကျောင်းတက်ရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းဟာ ယခင်က သူတက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းထက်ကို ကြီးပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ အဲဒီကျောင်းမှာ သူတက်ရတဲ့ စာသင်ခန်းဟာ ကျောင်းဝင်းထဲကနေ တောက်လျောက် ရောက်နိုင်တဲ့ မြေညီထပ်မှာ ရှိမနေပါဘူး။ လှေကားတွေကို တက်ပြီးနောက် ဟောလ်ခန်းမကြီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှသာ သူစာသင်ရမဲ့ အခန်းကို ရောက်ပါတယ်။
သူရဲ့ ပထမဆုံး ကျောင်းစတက်ရက်မှာ ဆရာမက “ ဒီနေ့တော့ ပုံဆွဲကြရအောင်” လို့ အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆရာမရဲ့ စကားကိုကြားတော့ ကောင်လေးကလည်း “သိပ်ကောင်းတာဘဲ.. ငါလည်း ပုံဆွဲချင်နေတာ” လို့ ပါးစပ်က ရေရွတ်လိုက်ပြီး ပုံဆွဲစာရွက်နဲ့ ရောင်စုံလေးတွေကို ထုတ်လိုက်ကာ ဆရာမဘာပုံဆွဲခိုင်းမလဲ ဆိုတာကို စောင့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆရာမဖြစ်သူက ဘာစကားမှ မပြောဘဲ အခန်းထဲမှာ လမ်းလျှောက်ပြီး ကလေးတွေပုံဆွဲနေတာကို လိုက်ကြည့်နေပါတယ်။ ဆရာမဟာ ကောင်လေးရဲ့ အနားကိုရောက်လာတော့ ဘာမှ မဆွဲသေးဘဲ ထိုင်နေတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့တော့ “သားက ပုံမဆွဲဘူးလား” လို့ သူ့ကို မေးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း “ဟုတ်ကဲ့.. ဆွဲမှာပါဆရာမ.. ကျွန်တော်တို့ ဘာပုံဆွဲရမလဲ” လို့ ဆရာမကို ပြန်မေးပါတယ်။
ဆရာမကလည်း “ သားဘာပုံဆွဲချင်လဲဆိုတာ ဆရာမ မသိဘူးလေ” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ “ ဒါဆို ဘာပုံဖြစ်ဖြစ် ဆွဲလို့ရသလား ဆရာမ” လို့ သူက မေးတော့ “ ရတာပေါ့။ သားကြိုက်တဲ့ပုံဆွဲလေ” လို့ ဖြေပါတယ်။ “ဘာအရောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆွဲလို့ရလား” လို့ သူက ပြန်မေးပြန်ပါတယ်။ “ရတယ်လေ.. သားကြိုက်တဲ့ပုံကို သားကြိုက်တဲ့အရောင်နဲ့ ဆွဲနိုင်တယ်။ သားတို့စိတ်ကြိုက် ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် ဆရာမက ဘယ်ပုံကိုဆွဲ၊ ဘယ်အရောင်ကိုသုံးလို့ မပြောတာပေါ့။ တကယ်လို့ အားလုံးက ပုံစံအတူတူဆွဲပြီး ဆေးရောင် အတူတူခြယ်ထားရင် အဲဒီပုံတွေကြည့်ပြီး ဘယ်သူက ဘယ်ပုံကိုဆွဲထားတယ်ဆိုတာ ဆရာမ ဘယ်မှတ်မိပါ့မလဲ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူတဲ့ပုံနဲ့ မတူတဲ့အရောင်တွေကိုဆွဲမှ မှတ်မိမှာပေါ့သားရဲ့” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆရာမရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ ကောင်ကလေးဟာ ပန်းရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာရောင်တို့နဲ့ ပန်းပွင့်လေးတွေ ဆွဲပါတော့တယ်။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ကောင်ကလေး စိတ်ကူးရှိတဲ့အတိုင်း ရွံ့စေရုပ်ကလေးတွေ အမျိုးမျိုးကို ပြုလုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က စပြီး ကောင်ကလေး ဟာ ကျောင်းသစ် ကြီးမှာ ပျော်ရွှင်သွား ပါတော့တယ်။ ကျောင်းသစ်ကြီးမှာ ကျောင်းပေါက်ဝကနေ သူ့စာသင်ခန်းကို တစ်ခါတည်းရောက်နိုင်တဲ့ တံခါးတွေ ရှိမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ပိတ်မထားဘဲ လွတ်လပ်စွာဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးပေါက်တွေတော့ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ သူစိတ်ကူးရှိတဲ့ အတိုင်း ဖော်ပြခွင့် ရတဲ့ ကျောင်းသစ်ကြီးဟာ သူ့အတွက် နေရာမှန် တစ်ခုဆိုတာ ကောင်ကလေးသိသွားခဲ့ပါပြီ။
လွတ်လပ်ခြင်းတံခါးများကို ပ်ိတ်ဆို့ကာဆီးခြင်းသည် တိုးတက်ခြင်းကို နှေးကွေးကြန့်ကြာစေသည်။
သူငယ်ချင်း SSY လက်ဆောင်ပို့ပေးသော Chicken Soup for the Soul မှ Helen E. Buckley ရဲ့ The Little Boy ကိုဖတ်မိပြီး နှစ်သက်မိတဲ့အတွက် ဘာသာပြန်ပါတယ်။ စိတ်ကူးဆန္ဒများ အားလုံး ပြည့်ဝကြ ပါစေရှင်...